U sheeg khibradaaga AutoCAD oo waxaad heshaa kamarad fiidiyoow ah - Gofumed
U sheeg khibradaaga AutoCAD oo waxaad heshaa kamarad fiidiyoow ah
Juunyo, 2008 AutoCAD-AutoDesk
Taasi waa, AutoDesk waxay siinaysaa kamaradaha kamaradaha kuwa isticmaala kuwaas oo diyaar u ah inay sheeko u yeeshaan sheeko ku saabsan sida ay AutoCAD bedeshay noloshooda; sidaas Waxay ku dhawaaqeen barta blogka ee u dhexeeya qadadka.
Oo aadan u malayn in aad siin doonaa camera a fudud, waa Video ku dhajisan, camera awood leh in ay u qoraan kartaa ilaa 60 daqiiqo video, taas oo ka mid ah keenayaa makarafoon iyo gacanta USB isku dhafan, iyo waxyaabo kale.
Si aad uga qayb qaadato adiga kaliya waa inaad soo dirtaa email adiga oo ku dhejinaya fiidiyowga aad diyaar u tahay inaad abuurto ... oo aad u bogsiiso Hurley. AutoCAD waxay tan sameysaa si ay u hormariso barnaamijkeeda podcast-ka, iyaga oo ka caawinaya inay bartaan xirfadaha wanaagsan ee dadka isticmaala.
Waxaa ka mid ah sheekooyinka ay filayaan inay noqon karaan mashruucyo hal-abuur ah oo aad ku naqshay AutoCAD iyo haddii laguu doorto, balanqaad keliya ayaa ah inaad u dirto fiidiyaha la qaaday oo leh kamarad la mid ah oo aad siiso.
Sidaas darteed haddii aad tahay user-ka AutoCAD, waxaad u maleyneysaa inay ahayd mid aad u faa'iido leh oo aad haysatid hal-abuur ku filan, waa inaad u dirtaa email autocad.video@autodesk.com. Boostada waa inaad tilmaantaa cidda aad tahay, waxaad samaynayso iyo waxa aad rajeyneyso inaad ku darto fiidiyahaaga.
Miyaad ku dhicin? ... Haddayna, ereygaaga ku dhex faafin saaxiibadaa sababtoo ah tirada kamaradaha waa kooban yahay.
Post Previous«Previous Manifold GIS wuxuu ku guuleystay abaalmarinta hogaaminta Gobollada GeoTec
Post Next $ 30 loogu dabaaldego maalinta blogger-kaNext »
Hal Jawaab u Jawaab "Ku sheeg khibraddaaga AutoCAD oo hel kamarad fiidiyoow"
kamaradaha dijitaalka ah oo raqiis ah isagu wuxuu leeyahay:
Waxyaabaha la soo saaray ee bogga cusub ee kamaradaydhka digital'ka ah iyo waxaan ku soo baxay boggan oo run ahaantii ii waxyoonay sida wanaagsan ee loo sameeyo. Hambalyo